Guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Afrika oo suurta galinaya in dib loo furo garoonka muqdisho » Laacib.so | Horyaalka Ciyaaraha Dalka iyo Caalamka
Home/ Africa/Guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Afrika oo suurta galinaya in dib loo furo garoonka muqdisho
Ramzi Yare April 17, 2017
Xogta ay heleyso laacib.so ayaa ah in guddoomiyaha xiriirka CAF uu la kulmi doono madaxda ugu sareysa dalka sida Madaxwaynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo iyo Raiisal Wasaare Xasan Cali Khayre, waxa uuna kala hadli doona hor marinta Isboortiga iyo suurta galnimada in Amison laga saaro Muqdisho Stadium.
Laacib.so : Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta qaaradda Afrika Maxamed Axmed ayaa goor dhow soo gaaray magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya, Gudoomiyaha oo dhowaan loo doortay xilka waa mas’uulkii ugu horeeyay ee CAF madax ka ah oo yimaada Soomaaliya wuxuuna u dhashay wadanka Madagascar.
Waxaa Garoonka Diyaaraddaha ee Aadan Cadde International ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo cayaaraha Khadiijo Maxamed Diiriye, Madax ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya C/qani Siciid carab iyo Xubno kale oo xiriirada soomaaliya kamid ah.
Gudoomiyaha CAF ayaa la kulmi doona Madaxda Dowladda Soomaaliya iyo kuwa xiriirka kubadda cagta ee Dalka si uu u ogaado xaaladda kubadda cagta iyo cayaaraha dalka.
Dhaawaca Paulo Dybala maka maqnan karaa lugta labaad ee champions league